ဟုတ်ပ့ မမ မေမေရယ်...
ဒါနဲ့ သမီးနဲ့မေမေနဲ့အသက်သိပ်မကွာဘူးလို့ထင်၇တယ်ပြောရင် မေမေကနုတာလို့ပြောလိုက်မယ်... :)
:-) ဂျပန်မှာ နေရတာ စိတ်ချမ်းသာမှာပဲနော်။ သူတို့ ၀န်ထမ်းတွေက စိတ်က ပါပါ မပါပါ ပျူပျူငှာငှာ ရှိတယ်။
ညီမတောင် ဒီကစာတိုက်ကနေ ဘာမှ ပို့ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။
service ဆိုတာဘာလဲ responsibility
တို့တော့ အဲသလိုတွေ မပို့ဘူးတော့ ဘာမှ မသိဘူး...
မမရေ... အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းကတော့ လူတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမှတ်တရလေးတွေပေါ့နော် :)
ဘာညာသရကာဆိုတာ ဘာလဲဟင်.. :)
ညီမလေးရေ.. အမကတော့ ပစ္စည်းမပို့ဖူးဘူး.. ဒါပေမယ့် ဟိုတရက်က စာမေးပွဲကြေးသွားသွင်းတော့ အားလုံးက အတော်လေး ဂရုတစိုက် လုပ်ပေးနေတာ ကိုယ်က ကြားထဲကတောင် အနေခက်ပြီး အားနာလာတယ်.. အဟီး.. နေတတ်ဘူးလေ. အရင်တုန်းက အဲဒီလိုမျိုးမှ မဟုတ်တာကိုးနော်.... :D
. ရေးရင်းနဲ့ ... စားချင်လာပီ
မြရွက်လိုပဲ တို့လဲ ဒီမှာ အသားကို မကျဘူး ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ တခုတော့ ကွဲလွဲတယ်။
ဒီမှာက လေယာဉ်လိုင်းတွေက ဗုံးပေါလအော ဆိုတော့ လေယာဉ်မယ်တွေက တို့ဆီကလို မပျူငှာဘူး။ မုန့်လဲ မကျွေးဘူး။ မုန့်ချိုချောင်း တချောင်းလောက် ပစ်ပေးလိုက်တာ။ ပြီးတော့လဲ တို့လေယာဉ်မယ်လေးတွေလို မလှဘူး။ အဖွားကြီးတွေ..။ ဒီတခုတော့ ကိုယ့်ပြည်က သာတယ်လို့ စိတ်ချမ်းသာရသေးတယ်။
ဟီးဟီးဟီး...ညီမလေးရေ..ဖတ်ပြီးရယ်သွားရတယ်..တကယ်. စာရေးအလွန်ကောင်း၏။ :P
မKOM--> ခုထိတော့ လည်နေတုန်းဘဲ။
မီးငယ်--> အသက်သာမကွာတာ အမက အသက်ထက်ဗျုနေတယ်။ အဲလောက်နုလာလေ။:D
ရွှန်းမီ--> အစိုးရရုံးသွားရတာတို့ကတော့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရမယ့် တာဝန်ကို သေသေချာချာလုပ်ကြတယ်။
Dr.Nyarn--> တပတ်လောက်လာလေ့လာလဲ တတ်မယ်မထင်ဘူးဆရာရေ့။ ပြောရရင် အခြေခံကစရမှာလား အထက်ကစရမှာလားတောင် သိတော့ဘူး။
မနိ--> ညီမက လူကြုံလဲအရှိ အသိလည်းမရှိ၊ ရှိပြန်တော့လည်း အားနာလို့ ကိုယ့်ဘာသာဘဲ ပို့ဖြစ်တာ။
GreenGirl--> အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းဆိုတော့ ပက်ကျိပေါ့နော်။ :P
မနု-စံ--> ဟုတ်တယ်အမရေ၊ သူတို့က အရမ်းဂရုစိုက်လုပ်ပေးရင် မနေတတ် မထိုင်တတ်တွေဖြစ်လို့။
မမြတ်နိုး--> ညီမလည်း နေကြာကွာစေ့စားချင်လာမှာစိုးလို့ ဘာညာသာရကာနဲ့ ရပ်ထားတာ။ :D
မမိုးချိုသင်း--> မပျူငှါဘူးပေါ့လေ။ ဟုတ်လား!။ ဒီမှာ အဲလိုလုပ်ရင် အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်ထင်တယ်။
မဝါဝါခိုင်မင်း--> အဲဒီနေ့ကဆို ကိုယ့်ကိုကို ရီလဲရီချင် ရှက်လဲရှက်နဲ့ ပြန်တွေးရင်း မျက်နှာပူတယ်၊ အဟီး။:D
ကျွန်တော်တို့ဆီက အချို့ဝန်ထမ်းတွေကို Service ဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိစေချင်တယ်။ သူတို့ကပဲ အားလုံးအတွက် အနစ်နာခံနေရသလို ဆက်ဆံနေတော့တာပဲ။ အရာရာကို ဟောက်ချင်တာတွေက တစ်ခုခုဆီကနေ ကူးစက်လာတာ နေမှာပဲ။